Ankitsim-po : takon’ny pesta | NewsMada
Ankitsim-po : takon’ny pesta
Raha ny voasoratra ao anaty tetibola 2017, maminavina ny fitondrana fa ho manodidina ny 7% ny fidangan’ny vidim-piainana amin’ity taona ity. Amin’izao telo volana fahatelo hifaranan’ny taona izao, tsy araka izany ny zava-misy raha tarafina amin’ny tarehimariky ny Instat.
Teo anelanelan’ny jona-jolay 2017, nisondrotra 0,3% ny vidin-javatra teto Antananarivo raha 0,5% ny iray volana talohany (mey-jona 2017). Nitombo ho 1,2% io tarehimarika io raha kajina ny nandritra ny telo volana (avrily-jolay 2017) ka oharina ny marsa-jona, nanome taha 1,5%. Raha kajina ny taona manontolo, nisondrotra 8,6% ny tahan’ny vidin-javarta raha raisina ny volana jolay 2016 hatramin’ny jolay 2017.
Nisondrotra 8,2% kosa ny fisondrotry ny vidin-javatra tany Fianarantsoa, tao anatin’ny herintaona (jolay 2016-jolay 2017).
Na lafiny fahasalamana aza ny tranga pesta, tsy maintsy miantraika any amin’ny toekarena sy sosialy ny fisiany satria miteraka korontana ara-tsaina eo amin’ny fiarahamonina. Iaraha-nahita ny firohotry ny olona teny amin’ny fivarotam-panafody nividy takom-bava.